Firefox 3 Ongororo, Marobhoti, Wedzera-maTweaks | Martech Zone
Izuva repiri na Mozilla Firefox 3 uye ini ndatoburitsa Safari kubva padoko rangu. Bhurawuza iri kukurumidza (Ndiri kufungidzira kusvikira yangu yese dzakakurumbira add-ons uye mashoma ekuvandudzwa ekuchengetedza anosvika). Ini ndinotenda zvakakodzera kukwiridzira uye ndinogona kumirira mazuva mashoma kusvikira mawedzera-ons akurumidza.
Kugoneka Kuvandudza pa ari Bhatani Kurongwa
Shanduko inonyanya kuoneka paunovhura FF3 ndiyo bhatani rakakura rekumashure muTbarbar. Kudos kune timu yechinongedzo pane ino shanduko. Akajairika marongero emamenyu masystem mumaapplication akaisa kukosha nenzvimbo, asi vagadziri veMozilla vakasarudza kuitora nhanho yekuwedzera nekuwedzera bhatani rekuseri. Uku ndiko kuchinja kukuru… vashandisi vane mukana wakanyanya wekushandisa bhatani iri kupfuura chero vamwe; semhedzisiro, saizi nekumisikidza ivandudzo huru.
Mamwe maTweaks muFirefox 3
Kana iwe ukanyora pamusoro: config mune url bar muFirefox 3, une kumwe kuwana kune mamwe marongero ayo ari maviri anonakidza - uye ane njodzi. Heano akati wandei eangu mafaro andatogadzirisa
general.WarnOnAboutConfig - kana iwe usingade yambiro paunovhura nezve.config, tinya kaviri izvi kuti ushandure yambiro FALSE.
browser.urlbar.autoFill - tinya kaviri kuCHOKWADI uye ma URL ako anozopedzisa otomatiki zvichienderana nenhoroondo yako.
browser.urlbar.doubleClickSelectsAll - tinya kaviri ku CHOKWADI uye kana iwe ukadzvanya-pinda mu url bar yako, inosarudza iyo URL yese kwete chidimbu chayo.
general.smoothScroll - tinya kaviri ku CHOKWADI uye inopururudza mapeji mubrowser yako zvakanaka.
chimiro.spellCheckDefault - isa izvi kuna 2 uye iwe unogona kuperetera kutarisa minda yese, kwete chete nzvimbo dzemavara!
Mazai eIsita: Meseji kubva kuRobots
mhando nezve: marobhoti mune iyo bar bar yeakanyanya kuseka! Zvakanaka kuona vashanduri vane pfungwa yekuseka. Ndinoshuva kuti zvimwe zvikumbiro zvaizowedzera Mazai eIsita seichi.
nezve: mozilla iri rimwe zai (ndinofunga rave mune imwe neimwe vhezheni).
Iyo yekuwedzera-ini yandisingakwanise kuita ndisina
Iyo Inonaka Bookmark Wedzera-on ingori inonakidza. Kana iwe uchiri kuchengetedza mabhukumaki mubrowser yako, MIRA IT! Del.icio.us inokutendera iwe kugovana zvinongedzo, kuzvironga, kuzvimaka, uye kunyange kuzvitumira kublog rako.
Chinhu chandinoda kuti chigadziriswe
Ini ndinoda ficha iri muInternet Explorer iyo inopenda iyo url bar girini pane dzakachengeteka nzvimbo. Ndinoshuva dai paine pamusoro: config kugadzirira izvozvo.
Tags: kupiswadaukabounce rategaga.jsgoogle yekutsvaga algorithmgoogle tag manejaomniturekubikasitecatalysttagging
Zvemagariro Midhiya uye Bhizinesi Isu
Jun 20, 2008 pa7: 38AM
Re: green URL bar - FF3 inoita chikamu che URL bar green kana iwe uchishanyira mamwe masosi. Pamusoro peizvozvo, pachinzvimbo chefavicon chete inoonekwa kuruboshwe, zita rekambani rinoonekwawo (ese ari maviri anowanikwa kumashure girini).
Ini ndinofunga zvine chekuita nechokuchengetedza chitupa nekuti paunosimudza mbeva yako pamusoro penzvimbo ine mumvuri unowana turu yekushandisa inoti "Verified by: Verisign, Inc."
Jun 20, 2008 pa9: 06AM
Hm. Ini ndinonyatsoda kutaridzika kwemabhatani ako, asi mabhatani angu eFF3 haatarike seizvozvo. Icho iganda here zvimwe?
Jun 20, 2008 pa10: 34AM
Kwete matehwe, Michelle. Uye yangu Windows muchina ine chitarisiko chakafanana.
Jun 20, 2008 pa9: 23AM
Michelle - bhatani rakagadzirirwa mac rinoratidzika rakatosiyana pane paunenge uchimhanya FF3 pane pc. Iwo ungave mutsauko here?
Jun 20, 2008 pa9: 29AM
Ini ndinoshandisa Delicious Bookmarks futi, kunyanya senzira yekugovana mabhukumaki pakati pemakomputa. Ini ndobva ndoshandisa kiyi yerudzi rwese rwemabhukumaki ne "ff:" kumberi. Nekudaro, ese mabhukumaki angu emari akaiswa ne "ff: mari" uye anogona kunge akaiswa seakavanzwa. Ini ndinogona kumaka iyo tag seyandinoda, saka inoratidzira pane Inonaka turu yekushandisa uye menyu.
Jun 20, 2008 pa 12: 44 PM
Ini ndinoshandisa zvinonaka, asi SocialMarker (http://www.socialmarker.com) zvakare ine bhatani iro rega rega iwe uchengetedze kune angangoita makumi matatu akasiyana masocial bookmarking saiti.
Inobatsira yekuparadzira blog zvinyorwa. 🙂
Jul 3, 2008 na12: 08 PM
Ndanga ndichishandisa FireFox 3 kubvira beta 3 kana 4, uye ndakangoziva kuti bara renzvimbo rinoshandisa yakazara zvinyorwa kutsvagisa kwemusoro uye URL yemapeji ese munhoroondo yako. Kunyangwe zvichitora wechipiri kana maviri kutsvaga iyo yese data, ichi chihombe chekushandisa chinhu icho pakutanga ini ndaisave nebasa nacho pakutanga, asi ikozvino rudo.